Air Suction Blower, Industrial Air Blowers, ukuncela Blower - Wonsmart
ICU umshini Blower
Ukuhlanza Umshini Wokuphefumula
I-Air Bed Blower
Home Zikagesi Blower
I-Vacum Cleaner Blower
I-Industrial Air Blower
Igciwane le-Mist Sprayer Blower
Umoya Cushion Machine Blower
I-Fuel Cell Blower
I-Rework Soldering Station Blower
I-Air Quality Monitor Blower
I-Ningbo Wonsmart Motor Fan Company ingumkhiqizi onguchwepheshe onogxila kuma-brushless dc motors amancane amancane nama-brushless dc blowers. Ukuhamba komoya kwethu okuphezulu kufinyelela kuma-cubic meter ayi-200 ngehora kanye nengcindezi enkulu engama-30 kpa. Ngezingxenye zethu zekhwalithi ephezulu nenqubo yokukhiqiza enembile, izinjini ze-WONSMART nezishayayo zingasebenza amahora angaphezu kwama-20,000.
I-Ningbo Wonsmart Motor Fan Company ingumkhiqizi onguchwepheshe onogxila kuma-brushless dc motors amancane amancane nama-brushless dc blowers.
Isungulwe ngo-2009, iWonsmart ibe nesilinganiso sokukhula esisheshayo esingu-30% minyaka yonke futhi imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu emishinini ye-Air cushion, abahlaziyi besimo se-Environment, umshini we-Cpap, imishini yezokwelapha neminye imishini yezimboni yezinguquko.
Imishini yokukhiqiza nokuhlola i-Wonsmart ifaka imishini yokugaya izimoto, imishini yokulinganisa nemishini ye-CNC. Siphinde sibe nemishini yokuhlola umoya kanye nemishini yokuhlola ukusebenza kwemoto.
I-Wonsmart ene-ISO9001, i-ISO13485, i-ETL, i-CE, i-ROHS, isitifiketi se-REACH futhi sinake ikhwalithi yomkhiqizo nokuhlinzekwa kwamakhasimende.
I-24V mini yezokwelapha i-brushless blower
i-blower yezokwelapha enamandla aphezulu
Ingcindezi ephezulu i-48VDC ring blower
i-vacum cleaner suction blower ephathekayo
isivinini esikhulu se-centrifugal blower fan nge-brushles ...
ipulasitiki yezindlu ukukhanya isisindo blower
I-12VDC encane ephehla ugesi
Izimo Zokulawula I-Brushless DC Machines
Brushless DC motor AC servo system ithuthuka ngokushesha ngenxa ye-inertia yayo encane, i-torque enkulu yokukhipha, ukulawula okulula nempendulo enhle enamandla. Inamathemba wokusebenzisa abanzi. Emkhakheni wokusebenza okuphezulu nokunemba okuphezulu kwe-servo drive, izongena esikhundleni se-DC yendabuko ...
Uphi Umehluko Phakathi Kwe-Brushless DC Motor ne-Brush Motor?
I-DC brushless motor ihamba ngenqubo yokushintshwa kwe-elekthronikhi, futhi umshini ongashayeki uhamba ngenqubo yokushintshwa kwebhulashi, ngakho-ke umsindo womshini ongashayeki, impilo ephansi, njengokujwayelekile komshini wokuphila womshini emahoreni angama-600 ngokulandelayo, ukungasebenzi kahle komshini wokuphila komshini kunqunywa ngokuzala impilo , ...
Yiziphi izinzuzo ze-Brushless DC Motor ne-AC Induction Motor?
Uma kuqhathaniswa ne-AC induction motor, i-brushless DC motor inezinzuzo ezilandelayo: 1. i-Rotor isebenzisa odonsa ngaphandle kwamanje okuthakazelisayo. Amandla kagesi afanayo angafeza amandla amakhulu womshini. 2.I-Rotor ayinakho ukulahleka kwethusi nokulahleka kwensimbi, futhi ukukhuphuka kwezinga lokushisa kuncane kakhulu. 3. inkanyezi ...
I-Ningbo Wonsmart Motor Fan Co., Ltd.